(Waxaa laga soo toosiyay Nebi Ibraahim)
Nabi Ibraahiim C.S ama Nebi Ibraahim Khaliifu Allah ( Af-Hebrow: אַבְרָהָם ; "nebi ibraahim"; loo yaqaano "Khaliifu Allah" oo ah "saaxiibkii Alle") waa nebi iyo rasuul ka mid ah anbiyada iyo rususha Ilaahay u soo diray dadka. Nebi Ibraahim wuxuu ahaa saaxiibkii Eebbe (s.w), waana mid ka mida shanta Rusul ee lagu sheegay kitaabka Quraan kariimka ah.
Suxufi Ibraahim Kitaabka Suxufiga ee Nabi Ibraahim (; , "suxufi ibraahim", ﮐﺘﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, "kitaab ibrahim"; ) waa kitaab diini ah oo Ilaahay (koreeyee) ku soo dejiyay Nebi Ibraahim. Qoraaladaasi waxaa khubarada diinta Islaamku u aqoonsan tahay ineey yihiin waxyigii Alle ku soo dejiyay Nebi Ibraahim; kuwaasi oo uu qoray Nebi Ibraahim naftiisa iyo isku duba rideen intii raacsanayd asaga ka dib markii uu geeriyooday.
Last edited on 5 Oktoobar 2021, at 18:16